August 2021 – Butwal 24 News
सिजी नेट : तीजको अफर आयो बरी लै, ग्राहकहरूले केके सुविधा पाउने ?
August 31, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on सिजी नेट : तीजको अफर आयो बरी लै, ग्राहकहरूले केके सुविधा पाउने ?
काठमाडौँ / सिजि नेटले हिन्दु महिलाहरूको महान पर्व तीजको अवसरमा विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले हालै मात्र नेपाली बजारमा भित्रिएको अहिलेसम्म कै सबै भन्दा छिटो सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने दावी गरिएको कम्पनीले तीजका महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै अफर सार्वजनिक गरेको हो । उक्त अफर भाद्र १६ देखि भाद्र ३० सम्म चल्ने छ […]
सबैलाइ हसाउने पाडे यस्तो अबस्थामा आमा एक्कासी अस्पताल भर्ना, सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना
August 31, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on सबैलाइ हसाउने पाडे यस्तो अबस्थामा आमा एक्कासी अस्पताल भर्ना, सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना
१५ भाद्र २०७८, मंगलवार २०:०१ काठमान्डौ : सक्किगोनी हास्य टेलि सिरियलका लेखेक तथा पात्र अर्जुन घिमिरे (पाँडे) ज्युको आमा ग्रीनसिटी हस्पिटलमा जिवन र मृत्यु सँग सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ,।आमा लाई शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित भगवान सँग आमा लाई चाडै ठिक होस भनि प्रार्थना गरौं अर्जुन लामो समयदेखि सक्किगोनि नदेखिनुको कारण भने पि’डादा’यी छ। झन्डै […]
पछिल्लो ५ दिनमा बाढी-पहिरोबाट १५ जनाको मृत्यु
August 31, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on पछिल्लो ५ दिनमा बाढी-पहिरोबाट १५ जनाको मृत्यु
१५ भदौ, काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा भदौ १० पछि आएको भारी वर्षा र त्यसपछिका बाढी, पहिरो र डुवानमा परी १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्यालले भदौ १० पछिको चार दिनमा बाढीपहिरामा परेर १५ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अवधिमा तीन […]
डिशहोमले नेपाल र पिएनजीबीच हुने ओडीआई सिरिजको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने । कहिले हुन्छ खेल ?
August 31, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on डिशहोमले नेपाल र पिएनजीबीच हुने ओडीआई सिरिजको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने । कहिले हुन्छ खेल ?
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडबीच नेपाल र पिएनजी बीच हुने एक दिवसीय अन्तराष्ट्रिय सिरिजको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । डिश मिडिया नेटवर्कका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्य र क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंहले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सिरिजका दुई खेल आगामी भदौ २२ र […]
August 31, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on बिष्णु माझीलाई इन्द्रेणी लैजान दैलेखका युवकले सामाजिक संजालमार्फत इन्द्रेणीलाइ चिट्ठी लेखे।
१५ भाद्र २०७८, मंगलवार १२:२९ 152 Shares facebook sharing buttontwitter sharing buttonemail sharing buttonmessenger sharing buttonwhatsapp sharing button पछिल्लो समयमा बिष्णु माझीको बारेमा अग्रज कलाकार देखी लियर बिष्णु माझीलाई माया गर्ने धेरै ले आआफ्नो प्रतिक्रिया दिदै आयको सामाजिक संजालमा देख्न सकिन्छ। सामाजिक संजाल संगै अहिले टिकटहरु समेत यसै कुराले भरीभराउ भयको समेत पाउन सकिन्छ। त्यस्तै […]
August 31, 2021 August 31, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on कुखुराको भाले ३० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा ।
एजेन्सी, १५ भदौ । चोरी, डकैती जस्ता अपराधिक मुद्दामा प्रहरीले मानिसहरुलाई जेलमा थुनेको त सुनैकै कुरा हो तर, आज हामीले प्रहरीको हिरासतमा रहेको कुखुराको भालेको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौ । प्रहरीले दुईटा भालेलाई ३० दिनदेखि नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले उनीहरुमाथि सट्टेबाजीको आरोप लगाएको छ । वास्तवमा मकर संक्रान्तिको पर्वमा दुईटा भाले लडाउने खेल […]
पहिलो महिला मुख्यमन्त्री दुई सातामै संकटमा
August 31, 2021 August 31, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on पहिलो महिला मुख्यमन्त्री दुई सातामै संकटमा
हेटौंडा : नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पद सत्तारोहणको दुई सातामै संकटमा परेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले बहुमत गुमाएसँगै मुख्यमन्त्री शाक्यको पद संकटमा परेको हो। मंगलबार एमालेबाट निर्वाचित १२ सांसदले आधिकारिक रुपमा एमाले त्यागेर नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोजेपछि प्रदेशसभामा एमालेले बहुमत गुमाएको छ। भदौ २ गते मात्रै शाक्य […]
August 31, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on घनश्याम, योगेश र रामकुमारीको रुवाबासी ! किन रोए उनीहरू ?
काठमाडौं – पटक-पटक विभाजनको चोट व्यहोर्दै आएको नेकपा (एमाले) फेरि टुक्रिएको छ । विभाजनले दुवैतिरका नेताकार्यकर्ताको मुहारमा न खुसी छ नत उत्साह नै । एमाले विभाजनपछि माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समावादी) गठन गरेका छन् । पार्टी विभाजनपछि भएका दुवै पार्टीका नेताहरूबीचको औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा नेताहरूबीच सैद्धान्तिक र कार्यदिशाको बहस भएको छैन । छ त […]
August 31, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on एमालेले दिँदैछ यस्तो निर्णय, दशैं अगावै ठूलै राजनीतिक भूकम्पको खतरा ?
काठमाडौं । कुनै बेला दुई तिहाइएको सरकार चलाएको नेकपा एमाले विभाजन भयो । एमालेमै रहेका नेताहरुबीच पनि बेमेल छ । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले धेरै पार्टीहरुमा विभाजनको चिरा परिसकेको छ । सरकारमा गएको राजनीतिक दलहरुले पनि राम्रो संकेत देखाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा दशैं अगाडी ठूलै राजनीतिक भुकम्पको खतरा देखिएको छ । २१ भदौसम्म […]
दाङ – दाङको तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त प्रमुखलाई दुर्व्यवहार गरेकाे आरोप लागेका अनेरास्ववियुका जिल्ला नेता सर्जन परियारले प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर भोक हड्ताल गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै परियारले कानुनलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्वयम् उपस्थित भएर न्यायको पक्षमा र झुटा मुद्दाको विरुद्धमा प्रहरीको हिरासतभित्रै भोकै हड्ताल बस्ने चेतावनी […]